Ogaden News Agency (ONA) – Intii Guusha u Qalanta umbaa ku Guulaysan
Qofna shaki kagama jiro inuu gumaysiga ka dhex kaluumaysanayo xubnaha iyo taageerayaasha, oo sidaan ugu dadaadalyno inaan ka kasbano cadawga ilaa heerka ugu sareeya uu cadawgana ugu dadaalayo. Waa dagaal gobanimadoon iyo xaaladihiisa. Halgan gobanimadoon oo umad lagaga xoreynayo dulliga gumaysiga waa shay qaali ah oo aanu u adkaysan karin qofkii iin leh. Halganka ka socda Ogadenya wuxuu la mid yahay dabka lagu kala saaro macdanta saafiga ah iyo qashinka la socda. Macdan kastaaana wuxuu leeyahay heer-kul uu kaga sifeysmo qashinka la socda.
Rasuulka CS markii la weydiiyay dadka yaa ugu fiican wuxuu ku tilmaamay banii-aadamka inuu la mid yahay macdanta kala duwan. Midkii xumaan u dhashayna aanu hagaagaynin waligii sikasta dad qiimi leh iyo halgan umadeed ha’ugu dhex jiro, midkii macdantiisu ay sareysana uu ka sii fiicnaan marka uu fahmo wanaaga iyo danta umadiisa خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا . Qofwalbana macdantiisa dhabta ah waxay soo baxdaa marka la maro tijaabo adag. Halgan gobanimadoon ayaana ugu adag tijaabo ay umad gumaysi ku jirta marto. Inta aanu halganka bilaaban qofkasta wuxuu jecelyahay in duliga gumaysiga laga xoroobo oo laga mid noqdo umadaha xorta ah. Waxaad arki iyadoo loo kala tartamayo halganka iyo hogaaminta halgamaaga. Waa la’isku milanyahay oo ma kala soocna macdantii dadka halganka u wada dareeray.
Wuxuu Ilaahay nooga qiseeyay, shacab nabigooda ka codsadey inuu boqor hogaamiya ka dhex qabto say ula dagaalamaan cadawga dullaystay oo markii loo yeelay siday codsadeen ka cabsaday dagaalka oo intoodii badnayd yidhi – لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده – oo halkii dib uga soo noqday. Wuxuu Ilaahay nooga sheegay in intii yareyd ee ku soo hadhay goobta dagaalka ay gaadheen guushii oy ka adkaadeen cadawgii ay intii badnayd ka carareen iyagoo leh –La’iskama celin karo maanta Jaaluut iyo ciidamadiisa.
Ilaahay qisooyinkaa quraanka ee ka sheekaynaya in waligeedba inta yar ee xaqqa ku adkaysata ay gaadhaan guusha looma soo dajin in lagu sheekaysto oo kali ah ee wuxuu Ilaahay ugu talagalay in lagu cibrad qaato. Urursiga gumaysiga uu urursanayo kuwaa aan qiimiga lahayn ee halganka ka carara, ka dibna uu siinayo darajo iyo meeqaam aanay ku lahayn halganka, waxay muujinaysaa un niyadjabka ka muuqda iyo guuldaradiisa. Waxaan horey u soo marnay heshiisyo uu gumaysiga leeyahay waxaan la saxiixday garabkii ugu weynaa ONLF oo bandhig iyo dabaaldag loo sameeyay. Ma odhan karno gumaysiga ma ogsoonayn beenta iyo riwaayada ay isla jilayeen Salaax-tuug, mana odhan karno sidoo kale gumaysiga ma ogsoonayn awooda ay lahaayeen kooxda Ibraahim dheere ee sidaan ogayn loo buun-buuniyay.
Waxaa hubaal markastoo waqtiga uu sii dheeraado inuu gumaysiga sii urursanayo qashin kuwaa la mid ah, gobanimadoonka uu ka faa’idayo nadaafad iyo mintidnimo.
Qoraalkan waxaa iska leh ama noo soo gudbiyay xubin kamida Akhrisatayaasha ONA.